Mijery lavitra… tsy mahita ny ambany maso | NewsMada
Mijery lavitra… tsy mahita ny ambany maso
Mitsinjo lavitra. Izany indray izao no ialokalofan’ny mpitondra, fialana bolila amin’ny tsy fahombiazana sy ny tsy fisian’ny asa mivaingana. Na fandrebirebena sy fampandriana adrisa hanaperana fotsiny ny fe-potoam-piasana, taona 2018. Tsy hita tsinona izay tena vahaolana maharitra sy azo antoka amin’ireo hoe laharam-pahamehana.
Eo ny ady amin’ny fahantrana, tsy fandriampahalemana, kolikoly, fanaovana tantely afa-drakotra sy ampihimamba ny harem-pirenena… Fanambin’ny governemanta hoe vonona hiatrika ady ireo. Aiza izay eo? Mitsinjo lavitra, hono, ka asa goavana sy maharitra no (h)atao: fanorenana fotodrafitrasa toy ny lalana, tohodrano…
Tsy misy maharatsy ny fijerena lavitra, fa mby aiza na ahoana ny ankehitriny? Varivarian’ny lavitra, tsy mahita ny ambany maso. Izay no mahatonga ny ankehitriny sy ny fiainam-bahoaka tsy misy tokotaniny. Ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny tsy fisian’ny asa miforona, ny tsy fanjarian-tsakafo…
Nefa amin’ireo hoe ady atrehina ireo, tsy hita mazava izay tena politika sy fandaharanasa ary paikady… mitsinjo lavitra azo antoka. Famonoana afo na fisehoana hoe manao sy mahavita zavatra no atao? Eo ny vahoaka mitsara, raha misitraka inona amin’izao fitondrana izao: mihatsara ve, ohatra, ny fari-piainana? Tsy mila porofo izany.
Ahina ho fitsinjovana lavitra hitanana fahefana amin’ny fe-potoam-piasana manaraka no afitsoky ny mpitondra amin’izao, fa tsy izay tena tombontsoam-bahoaka mivantana. Ao anatin’izany ny fiatrehana ny fifidianana, taona 2018; ny lalàn’ny fifandraisana hamoretana ny fahalalahana maneho hevitra sy mamoaka vaovao.
Toy izany koa ny amin’ny fananganana fitsarana manokana misahana ny heloka ara-toekarena, vola, hetra, nanomboka ny taona 2002 hatramin’ny faran’ny Tetezamita: famotehana ny mpifaninana amin’ny tena. Fitsinjovana izay fifidianana izay avokoa ny ataon’ny mpitondra amin’izao? Mahavery fanahy…